Featured – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Q. သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ကျောက်ကပ်အကြောင်းလေး သိချင်လို့ပါဆရာ။ သူ့ကျောက် ကပ်က efficiency ကျနေပြီး၊ ဆရာဝန်က ကျောက်ကပ်သက်တမ်းက နောက် ၁၀ နှစ်လောက်ထိပဲ ရတော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး အိမ်လည်းမပြောဘူး၊ ဆေးလည်းမကုဘူး...
—၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊— Q. ငယ်ငယ်တုန်းက အလုပ်လုပ်ရတော့ ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်အိမ်တည်း နေပေမယ့် မိုးလင်း၊ မိုးချုပ် အလုပ်သွားနေရတဲ့အတွက် ကလေးတွေကျောင်းပို့တာ၊ ကလေးတွေစာကျက်တာ၊ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတာကအစ အဖေအမေ(ကလေးတွေရဲ့ အဘိုးအဘွား) တို့ကပဲ...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊—– Q. ဆရာ . . မိန်းမကိုယ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်ကျဉ်းဆေး၊ သားအိမ်သန့်ဆေးဆိုပြီး လိုင်းပေါ်မှာ ရောင်းနေကြတာတွေက ယုံကြည်သင့်ပါသလား။ အဲလိုဆေးနဲ့ကုရင် ကျဉ်းတာ၊ သန့်တာတွေ တကယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။ ဒီဆေးတွေက ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ...
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– ဆေးဝါးအသောက်များခြင်းနှင့် ကျောက်ကပ်ပျက်ခြင်း Q. ဆေးတွေအသောက်များရင် ကျောက်ကပ်ပျက်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင့်။ Cherry Moe(FB) A. ကျောက်ကပ်ရဲ့ အဓိကတာဝန်က ရေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို စွန့်ထုတ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– နိဒါန်း အမျိုးသမီး ကာမဆက်ဆံခြင်း ချို့ယွင်းရောဂါ (Female Sexual Dysfunction) ၅ မျိုးရှိတယ်။ (၁) ကာမဆန္ဒလျော့နည်းကျဆင်းရောဂါ (Hypo-active Sexual Desire Disorder)...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေး(Recreational Drug)၊ ပျော်ရွှင်ပွဲပါတီ မူးယစ်ဆေး(Party Drug)၊ ညကပွဲရုံမူးယစ်ဆေး(Nightclub Drug)စသဖြင့် အမည်တွင်တဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေအကြောင်းကို စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာနဲ့ စကားလက်ဆုံကျနေပါတယ်။ ကိုတာက ဆက်လက်မေးမြန်းတယ်။ “အမ်ဒီအမ်အေ(MDMA)(အက်စ်တစီ)ဆေးလုံးနဲ့...
အဆုတ်ကင်ဆာဖြင့် သေဆုံးသွားသူက အခြားသူများကို ဆေးလိပ်အမြန်ဖြတ်ကြရန် သေတမ်းစာတွင် ရေးသားခဲ့
——-၊ ကိုထက် ၊——- နယူးရော့ခ်မှာနေထိုင်တဲ့ ဂျော့ဖယ်ရီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့က အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၆၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂျော့ဟာ အဆုတ်ကင်ဆာ အဆင့် ၄ ဖြစ်နေကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလက စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။...